ခြေထောက်နာကျင်မှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဘယ်လိုရှာမလဲ ကျန်းမာသောခြေထောက် | Santotoro
Bionions – သင်၏ခြေချောင်းကြီး၏အောက်ခြေတွင်ရှိသည့် V မွေ့လျော်သောအဖုအပိမ့်များသည်အရေပြားပေါ်တွင်နာကျင်မှု၊ ပွတ်တိုက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သူတို့ကအစကကိုက်ညီဖို့ဖိနပ်ကိုရှာဖွေခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဆရာ ၀ န်များက၎င်းတို့အားလုံးသည်ဖိနပ်တင်းကျပ်စွာ ၀ တ်ဆင်ထားသည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ယင်းတို့ကပြworseနာများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်မှာသေချာသော်လည်း၎င်းသည်အဆစ်သို့မဟုတ်အဆစ်ရောင်ခြင်းအားနည်းခြင်းကိုအစဉ်အဆက်အစဉ်အလာအနေဖြင့်ပေါင်းစည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သင်၏ခြေချောင်းများမရှုပ်ထွေးစေနိုင်သောနေရာကျယ်ကျယ်သောဖိနပ်အနိမ့်အမြင့်ဖိနပ်သည်ခြေချောင်းများပေါ်တွင်ပွတ်တိုက်အားကိုလျော့နည်းစေပြီးသင်လိုအပ်သမျှဖြစ်နိုင်သည်။ အထူးကုဆရာဝန်တစ် ဦး သည်အကောင်းဆုံးဖိနပ်များနှင့်ကြက်သွန်နီစားပွဲခုံပေါ်တွင်အကြံပေးနိုင်သည်။ ခက်ခဲသောကိစ္စများတွင်သင့်ဆရာဝန်ကခွဲစိတ်ကုသရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လွယ်ကူသောရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတွင်အဆစ်ကိုချုံ့ခြင်းသို့မဟုတ်အရိုးများကိုကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့်ညှိခြင်းတို့ပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းသည်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကုသမှုကိုပေးသည်။
မင်းရဲ့ခြေချောင်းတွေကိုအနားမှာဖြတ်တောက်ထားသလား။ ရုံ – မ – အစဉ်အဆက်! ၎င်းသည်နာကျင်ကိုက်ခဲနေသောခြေချောင်းများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်လေ့ရှိပြီးလက်သည်း၏ဘေးထွက်နူးညံ့သောအသားထဲသို့များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ စောစောစီးစီးဖမ်းမိသောခြေချောင်းလက်သည်းကြီးထွားခြင်း (ဝါဂွမ်းအပင်နှင့်ညနေတိုင်းလက်သည်းကိုစုပ်ယူခြင်းနှင့်ဖြိုဖျက်ခြင်း) သည်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ခြေသည်းလက်သည်းထိုးခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကမ်းစာစောင်တွင်မည်သို့အသေးစိတ်လေ့လာရမည်ကိုသင်ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပiotိဇီဝဆေးနဲ့တစ်ခါတစ်ရံမှာလက်သည်းအစွန်းကိုဖြတ်ဖို့ခွဲစိတ်ကုသမှုလိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်အထူးကုဆရာဝန်သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မှပြုလုပ်သည်။ Podiatrists များသည်ပြောင်းဖူးများ၊ verrucas များ၊ ခြေချောင်းများထိုးသွင်းခြင်း၊ ခြေသည်းလက်သည်းညှပ်ခြင်းနှင့်အခြားခြေပြproblemsနာများနှင့်အတူကူညီနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် NHS တွင်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် NHS အတွင်းဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချက်များသည်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဒေသတစ်ခုစီမှအာဏာပိုင်များကဆုံးဖြတ်သည်။ အချို့သည်ခြေချောင်းဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဆီးချိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများရှိသူများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကန့်သတ်ခြင်းစသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများမပေးတော့ပါ။
plantar fasciitis ကော?
Plantar fasciitis သည်သင်၏ဖနောင့်အောက်ရှိခက်ခဲသောချိတ်ဆက်မှုတစ်သျှူးကိုရောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းရုတ်တရက်တိုးခြင်း (အထူးသဖြင့်ဖိနပ်တွင်ကူရှင်မပါသည့်ဖိနပ်များတွင်) သည်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အဝလွန်ခြင်းသည်သင့်ကို ပို၍ ကျရောက်စေသည်။ အနားယူခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းဆန့်ကျင်သောတက်ဘလက်များနှင့်ကောင်းစွာဖိစီးထားသောဖိနပ်များကကူညီနိုင်သည်။
သင်၏ခြေထောက်နှင့်ခြေကျင်းတို့၏ဆက်သွယ်မှုတစ်သျှူးကိုဆန့်ရန်လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေလက်နာကျင်မှုဆိုင်ရာလက်ကမ်းစာစောင်တွင်သင်ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်သောဇီဝကမ္မကုထုံးဆရာအားကျွန်ုပ်တို့ခြေထောက်နာကျင်မှုဗီဒီယိုတွင်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဤအရာများသည်မအကူအညီဖြစ်ပါကနာကျင်သည့်နေရာသို့ဇီဝကမ္မကုထုံး (သို့) steroid ဆေးထိုးရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
အားကစားသမား၏ခြေသည်အားကစားသမားများအတွက်သာမဟုတ်ပါ။ သင်၏ခြေထောက်များကိုပူပြီးချွေးနွေးစေသောမည်သည့်ဖိနပ်ကမဆိုဤဖန်းဂတ်စ်ကူးစက်မှုကိုကျရောက်စေနိုင်သဖြင့်ခြေထောက်များအကြားအရေပြားယားယံခြင်း၊ မှိုမှိုအရေခွံများနှင့်အမှုန့် (ချွေးစုပ်ယူရန်) သည်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းသင့်ပြီးပြtheနာပျောက်ပြီးနောက် (၁) ပတ်ခန့် (၂) ပတ်ခန့်ဆက်လက်သောက်ရန်လိုအပ်သည် (သင်၏ဆေးဝါးပညာရှင်ကအကြံပေးနိုင်သည်) ။
စင်ကြယ်သောခြောက်သွေ့သောမျက်နှာသုတ်ပဝါကို သုံး၍ ခြေချောင်းများအကြားအမှန်တကယ်ခြောက်သွေ့စွာသွေ့ခြောက်ပါ။
ကျန်းမာသောခြေထောက်အတွက်ခြေနင်းဖိနပ်အနည်းငယ်ကိုလိုက်နာပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်၌ဆီးချိုရောဂါရှိပါကသင်၏ခြေထောက်ကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးရန်နှင့်အနာရောဂါဖြစ်စေသောအနာများသို့မဟုတ်အနာများကိုသင်၏မိသားစုထံတင်ပြရန်လိုအပ်သည်။
ပန့်များသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အဆင်ပြေသော်လည်း၊ သင်၏မုတ်များကိုမထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းကြောင့်နာကျင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ခြေချောင်းတွေပြတ်သွားစေနိုင်တယ်။ တင်းကျပ်သောဖိနပ်သည်သင့်ကိုခြေချောင်းများနှင့်ပြောင်းဖူးများနှင့်ကျိုင်းကောင်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်လေ့ရှိသည်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်သည်သင်၏ခြေထောက်များကိုရှေ့သို့တွန်းထုတ်သည်။ ၎င်းသည်ခြေညှပ်ဖိနပ်များအတွက်အချိန်မဟုတ်နိုင်သော်လည်းသူတို့သည်သင်၏ခြေကိုရှူရှိုက်ကာအားကစားသမား၏ခြေထောက်အခွင့်အလမ်းကိုလျှော့ချပေးသည်။ သို့သော်ပန့်များကဲ့သို့သူတို့သည်အထောက်အပံ့မပေးနိုင်ကြပါ၊
သားရေဖိနပ်သည်သင်၏ခြေထောက်များကိုဓာတုဗေဒနည်းများဖြင့်မရှူရှိုက်စေစေပါ။ padding များစွာပါ ၀ င်သောကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားသည့်နည်းပြများသည် plantar fasciitis နှင့်ပြောင်းဖူးအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချနိုင်သော်လည်းအားကစားသမား၏ခြေထောက်ကိုရှောင်ရှားလိုပါက၎င်းတို့ကိုကြာမြင့်စွာမဝတ်ပါနှင့်။ သင်၏ခြေနည်းနည်းပိုကြီးသောအချိန်တွင်ဖိနပ်များကို ၀ ယ်ပါ။ ပါးနပ်သောအသွင်အပြင်တစ်ခုအတွက်ခြေကျင်းကြိုးတစ်ချောင်းပါသည့်ကြောင်ဒေါက်သည်စမတ်ကျသည် – သူတို့လည်းသင့်ခြေထောက်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။